यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज का’ल बनेर आयो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारयिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज का’ल बनेर आयो !
यिनै हुन् दुई दिदिबहिनि जसलाई तीज का’ल बनेर आयो !
काठमाडौं । दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणको काम कत्ति पनि अघि बढेन । फलस्वरुप बुधबार राति निकै दुःखद घ’टना भयो । दाङमा सिस्नेखोलामा आएको बाढीले जीप ब’गाउँदा चारजनाको मृ’त्यु भएको छ ।
घोराही-लमही सडक खण्डको घोराही उपमहानगरपालिका–४ स्थित सिस्नेखोलामा आएको बाढीले बुधबार राति १० बजे जीप बगाउँदा ४ जनाको ज्यान गएको हो । मृ’त्यु हुनेमा एकै घरमा दुई दिदीबहिनीसहित चारजना रहेका हुन् ।तिजका सामग्री किनमेल गर्ने भनी चालकसहित पाँचजना कार रि’जर्भ गरेर भारतको रुपैडिहा गएका थिए ।
सामान किन्दा–किन्दा रुपैडिहाबाट फर्किने क्रममा रात परिसकेको थियो । राति १० बजे सि’स्नेखोला पुगे । महिलाहरूको महान् पर्वका रूपमा लिइने तिज मनाउन सामान ल्याएर फर्किँदै थिए । तर, उनीहरूको तिज मनाउने सपना चकनाचुर पार्‍याे ‘सिस्नेखोलाले ।’
त्यो दिन खोला ठूलो आएको थियो । ठूला सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सक्ने भए पनि साना सवारीसाधनहरू आ’वतजावत गर्न सक्ने अनस्था थिएन । अन्ततः कार पनि बग्यो । चालक हा’म फा’लेर बाँच्न सफल भए । तर, अन्य चार महिलाको मृ’त्यु भयो ।
मृ’त्यु हुनेमा दुईजना एकै घरका हुन् ।घोराही उपमहानगरपालिका– १३ निवासी ३२ वर्षीया सुशीला श्रेष्ठ र घोराही– १४ निवासी ३० वर्षीया राधा श्रेष्ठ दुई बहिनी हुन् । उनीहरू घो’राही उपमहानगरपालिका– १६ का वडा सदस्य ज’गत श्रेष्ठका छोरीहरू हुन् ।